Iwo "akanakisa" matoyi: Toy-Award 2022 yakaunzwa - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 2, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Nuremberg Toy Fair
Pakuvhurwa kweSpielwarenmesse Digital, timu kubva kune inotungamira chiitiko cheindasitiri yakapa mubairo une mukurumbira wekuvandudza kune mashanu anonyanya kuvandudza chigadzirwa. Sechisimbiso chakakosha chemhando, Mubairo weToy Fair's Toy unonakidzwa nechinzvimbo chepamusoro muindasitiri yematoyi yepasirese.
Vakahwina gore rino vakasarudzwa pakuvhurwa kweSpielwarenmesse Digital. Munzvimbo yePreSchool, Legler's "Emergency Doctor's Backpack" yakakunda. Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN vakahwina chikamu cheSchoolKids ne“Fabulus Elexus”.
Ipo "maungira - Iyo Audio Mystery Game" naRavensburger yakahwina muchikamu cheTeenager & Adults, OPPI yakatora nzvimbo yekutanga muchikamu chekutanga ne "Piks". "Mhuka Shamwari" kubva kuFischertechnik yakakunda muchikamu chitsva cheSustainability. Iko hakuna vakasarudzwa muchikamu cheBaby & Mucheche gore rino uye nekudaro hapana anokunda.
Zvakanakisa matoyi muzvikamu zvishanu
Ese magadzirirwo ekuhwina mubairo akatendesa dare rinoumbwa nevamiriri veindasitiri yepasirese maererano nekugona kubudirira mukutengesa, kunakidzwa, kwekutanga, chengetedzo, kunzwisiswa kwechigadzirwa pfungwa pamwe nekugadzirwa uye kunaka. Iyo ToyAward yakakosha nzvimbo kuSpielwarenmesse Digital inopa tarisiro yevose vakasarudzwa uye vakundi.
Category PreSchool (3-6 makore)
Chiremba Emergency Chiremba, Legler
Legler's "Emergency Doctor's Backpack" ndiyo dudziro yemazuva ano yenyaya yematoyi yachiremba. Bhegi remhando yepamusoro rine midziyo yakawanda yechokwadi yekutevedzera nharembozha yekuchengetedza - kubva mabhandeji uye stethoscope kuenda kune yeropa rekutarisa uye mini defibrillator. Magadzirirwo emishonga yemishonga akapwisa vatongi vematare kuti: "Magadzirirwo emidziyo yemazuva ano uye kugadzirwa kwayo kubva kumapuranga akawanda akapfava zvakakodzera kutaurwa zvakanyanya."
Category SchoolKids (6-10 makore)
Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN yakaita zvemashiripiti yakarongedza zvakavanzika zve chemistry mu "Fabulus Elexus" kit. N'anga diki dzinoshandisa bhuku remashiripiti reelixirs kugadzira akasiyana mashiripiti potions kubva kuhozhwa slime uye elf ropa. Chinhu chekudzidza hachina kuregeredzwa: Usati watanga, mabhodhoro ese anofanirwa kunyorwa. Vechidiki vanodzidza nezve kuumbwa uye mhedzisiro yezvigadzirwa. "Kiti ine chinhu chakanyanya kunakidza uye inoswededza vana pedyo nemusoro wechemistry nenzira yekutamba," vatongi vakarumbidza.
Chikamu vechidiki & vakuru (kubva pamakore gumi)
echoes - Iyo Audio Mystery Game, Ravensburger
Mu "echoes" naRavensburger, zvisinganzwisisike nyaya dzinofanirwa kugadziriswa nerubatsiro rwekuteerana kwekuteerera. Kutanga, makadhi ekutamba anoongororwa uchishandisa app. Zvichienderana nezvinonzwika zvinonzwika zvinozoridzwa, vaongorori vanonetsa pamusoro pekuti uye nenzira ipi yavanofanira kusanganisa makadhi matatu kuti vagadzirisezve mafambiro ezviitiko. "Mutambo weodhiyo unokodzera zvakakwana munguva yepodcast uye unodzidzisa kuungana kwevatambi kuburikidza neacoustic matipi," waive mutongo wejury.
OPPI yakafungazve nyika yezvivharo zvekuvaka: "Piks" igadziriso yezvigadzirwa zvemapuranga uye "mabhuroki" akaita sekoni akagadzirwa nerabha yakapfava, inosiyana muhurefu zvichienderana neruvara. Iine muromo wayo wakatenderedzwa, zvitsva zvinodiwa zvinogadzirwa pane statics yezvivakwa. Mirayiridzo yekuvaka patsva matemplate akasiyana ane mavara-coded zvichienderana nekuoma kwawo. “Toyi yokuvaka inodzidzisa unyanzvi hwemotokari dzevana uye kuisa pfungwa pachinhu chimwe zvakaenzana,” vakarumbidza nhengo dzedare revatongi.
Mhuka Shamwari, Fischertechnik
Ne "Shamwari dzeMhuka", Fischertechnik iri kuunza kit yekuvaka yakagadzirwa kubva ku50% inogona kuvandudzwa zvinhu. Mhuka dzakasiyana-siyana dzinogona kugadzirwa patsva kubva pane yakatarwa. Iwo abstract, mavara anopenya emhando, ayo anoratidza kuva akanyanya kugadzikana uye anochinjika, anoshamisa. "Nehutsva uhwu, Fischertechnik, semugadziri wemhando anozivikanwa, ari kutumira chiratidzo chakakosha kuindasitiri maererano nekugadzikana," inosimbisa iyo nyanzvi jury.
Iyo webhusaiti inopa rumwe ruzivo nezve jury uye vakundi vemakore apfuura www.toyaward.de.
Tafura ine ese anokunda mazita. Mufananidzo: Spielwarenmesse eG
Ravensburger anofara nezve "echoes" kukunda
"Yemazuva ano uye yakakwana yenguva yepodcast," waive mutongo wejury echoes, mutambo wakavanzika wekuteerera naRavensburger. Mufaro wekukunda mukuru. “maungira” akakunda muchikamu che“Vechidiki neVakuru”. Ihwo hutsva: Mu "maungira" vatambi vanonyura munyaya dzinonakidza uye vanozviita kuburikidza nekunzwa kwavo. Izvo zvakakosha kuti uteerere kune maungira ekare uye kuvakazve zvisinganzwisisike zviitiko nerubatsiro rweapp. Pakutanga kweDigital Toy Fair nhasi, dare revatongi, rinoumbwa nevamiriri veindasitiri yepasi rose, rakazivisa vakundi muzvikamu zvishanu zvezvigadzirwa.
"Echoes" yakanangana nevatambi 1-4, vane makore gumi nemana+. Pfungwa iyi yakabva kuna Dave Neale (kusanganisira Unlock! uye Sherlock Holmes - Consulting Detective: The Baker Street Irregulars) naMatthew Dunstan (Elysium, Chocolate Factory uye Relic Runners).
Inzwa, shamisa uye gadzirisa pamwe chete: Mu "maungira", vatambi vane makore gumi nemana zvichikwira vanonyura munyaya dzinonakidza kuburikidza nekunzwa kwavo. Ravensburger's interactive "Hörspiel" series yakatanga munaGunyana nenyaya nhatu dzisinganzwisisike: "The Dancer", "The Cocktail" uye "The Microchip".
"maungira" - The Ring
Mutambo wenhaka yekare unopinza mukadzi wechidiki munhamo. Chii chakashata nedombo iri? Iwo Echoes of the Kare akabata chokwadi pamusoro pekutuka pamhete.
"Echoes" - mutambi
Chipoko chemusikana wechidiki chinotambudza imba yekuScotland. Nyatsoteerera kune zvimedu zvenyaya yake isinganzwisisike uye nokudaro gadzirisa chirahwe cherufu rwake.
"Echoes" - cocktail
Mune imwe pub isiri pamutemo, vatambi vanobva kuNew York underworld vanoita zvirongwa zvisina kunaka. Teerera kuhurukuro kubhawa uye gadzirisa chirahwe chemutungamiri wavo, "Cruel Steve".
"Echoes" - iyo microchip
Munguva yemberi iri kure, nyika ichava matongo. Tevedza acoustic traces ekare uye gadzirisa chakavanzika chakasviba chekuora kwebudiriro yemazuva ano.
Mamwe maviri achawedzerwa muna 2022: "The Ring" uye "The Violin". Nyaya idzi dzinoda kugadzirwa patsva uchishandisa app. Izvi hazvidi chete ndangariro dzakanakisa, asiwo hunyanzvi hwakawanda hwekusanganisa - uye pamusoro pezvose, kunzwa kwakanyanya. "Mutambo weodhiyo haungopindirani chete munguva yepodcast, asi zvakare unodzidzisa kusarudzika kwevatambi kuburikidza neacoustic matipi," ndiko kwaive kuongorora kwejury.
Isinganzwisisike mutambo wenyika inogadzirwa kuburikidza nemimhanzi, ruzha uye mutauro
Chinhu chakakosha nezve echoes: Ravensburger inonyanya kugovera zviratidziro zvinoonekwa - isinganzwisisike mutambo wenyika inogadzirwa kuburikidza neruzha senge mimhanzi, toni uye mutauro. Makadhi makumi maviri nemana chete ane mifananidzo yemuchadenga anopa zvimedu, zvimwe zvakavanzwa mukutamba kweredhiyo yemhando yepamusoro. Seri kwechifananidzo chega chega kune manzwi akakosha kana zvikamu zvehurukuro. Neyemahara "echoes" app, vatambi vanogona kuvateerera kana vangofambisa nharembozha yavo kamera pamusoro pezvinhu zvemutambo.
Zvimwe zvese zvinotevera musimboti wemutambo wakapfava: Nyatsoteerera, cherechedza zvese uye sanganisa zvaunonzwa nezvaunoona. Mutambo uyu wakakamurwa kuita zvitsauko zvitanhatu, umo vatambi vanofanirwa kuenzanisa makadhi matatu chaiwo echinhu - uyezve nehurongwa hwakakodzera. Kana vatambi vapedza kugadzirisa zvitsauko zvese zvega, zvakakosha kuisa zvitsauko zvitanhatu muhurongwa chaihwo pakupedzisira. Chero ani anokwanisa kuita izvi achaziva kuti nyaya isinganzwisisike, inonakidza yakaitika.
"Echoes" inopa mazinga maviri ekuoma: Vanotanga vanotanga nehafu yemakadhi echinhu. Vane ruzivo ve "echoes" vaongorori vanotanga zvakananga nemakadhi ese echinhu gumi nemasere. Muzviitiko zvese izvi, zvinhu zvemutambo zvinogona kushandiswa zvakare mushure mekugadzirisa nyaya. Izvo zvikamu zvega zvinodhura 18 euros (RRP).
Iyo "echoes" app ichave iripo yekudhawunirodha mahara pamatafura uye mafoni anomhanyisa iOS kana Android. Kana zvichidikanwa, haangopi rubatsiro rwekugadzirisa nyaya yacho, anogadzirawo mamiriro akakodzera panguva imwe chete.
Ravensburger 20814 inopindirana neThe Cocktail - Audio Mystery Game kubva... * 7,95 EUR tenga
Kare WWE 2K22: Gameplay - anopfuura maminetsi mapfumbamwe!
Inotevera Warhammer 40.000 Chaos Gedhi - Daemonhunters: Grey Knights kirasi
PUBG: Nzvimbo dzekurwira ikozvino nekuvandudza 17.1 kune ese mapuratifomu
Strategic board mutambo weHondo Yese: Roma iri kuuya
Kutarisa pabhodhi mutambo # 1: Diki Samurai Empires